TensorFlow နှင့် Pytorch: ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် AI ပလက်ဖောင်းများ | Linux မှ
TensorFlow နှင့် Pytorch ပလက်ဖောင်း ၂ ခုရှိသည် «Inteligencia Artificial (IA)» de «Código Abierto»။ ပထမတစ်ခုကိုဂူဂဲလ်ကဖန်တီးခဲ့ပြီးဒုတိယတစ်ခုကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ဒါပေမယ့် Artificial Intelligence ဆိုတာဘာလဲ။ La «IA»ကျနော်တို့ကိုခေါ်ယခင်ဆောင်းပါး၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း "စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေး - ဒီခေတ်သစ်တွင်အခမဲ့ဆော့ဝဲ၏အခန်းကဏ္။" လက်ရှိ ၂၁ ရာစုဒီဂျစ်တယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲနေတဲ့နည်းပညာအသစ်တွေထဲကတစ်ခုပါ။
အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ «IA» ကဲ့သို့ နည်းပညာ ကနေရရှိလာတဲ့ ၏ပေါင်းစပ် algorithms ၏ရည်ရွယ်ချက်ဒီဇိုင်း စက်ယန္တရားများဖန်တီး (ဆော့ဝဲလ်) အတူတူပစ္စုပ္ပန် စွမ်းရည် အဆိုပါ လူ့ဖြစ်လျက်ရှိ.
La «IA» ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သည် စက်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် (သို့) အခြားသူများ၏အတွေ့အကြုံများမှသင်ယူသည်အသစ်သောဗဟုသုတနှင့်နေထိုင်ခဲ့သည့်အခြေအနေများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အခြားလူသားတစ် ဦး လိုလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း။ ထို့အပြင်ဤနည်းပညာကိုများသောအားဖြင့်တွဲဖက်သို့မဟုတ်အခြားသူများ၏လက်ဖြင့်အထူးသဖြင့်အဖြစ်လူသိများ2«Aprendizaje Profundo (Deep Learning)» y «Procesamiento del Lenguaje Natural (Natural Language Processing)»။ ပြီးနောက် «Big Data» ၎င်းကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
ဤသို့သောနည်းများဖြင့်ထိုနည်းပညာများသည်လက်ရှိကွန်ပျူတာများနှင့်စက်ရုပ်များနှင့်တစ်နေ့ Androids ဖြစ်နိုင်သည် ထိရောက်စွာနှင့်ထိရောက်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားဒေတာအမြောက်အမြားကိုပြုပြင်ခြင်း၊ ဒေတာပုံစံများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ကစားခြင်းသို့မဟုတ်အလုပ်လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဖြေရှင်းခြင်း၊ လှည့်ပတ်ခြင်း (မိမိကိုယ်ကိုယ်မောင်းနှင်ခြင်း) သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများကိုအခြားနေရာများသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းစသည့်တိကျသောလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်။
1 Artificial Intelligence (AI) အမျိုးအစားများ
2 ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် AI ကိုပလက်ဖောင်း
2.1 TensorFlow: အဲဒါကဘာလဲ။
2.2 Pytorch: ဒါကဘာလဲ၊
Artificial Intelligence (AI) အမျိုးအစားများ
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင် AI သည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
လူသားလိုထင်တဲ့စနစ်များ: မသန်စွမ်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ပြsolvingနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် - R ကိုအတုအာရုံကြော edes ။
လူသားများကဲ့သို့ပြုမူသောစနစ်များ: စက်တွေကိုဖန်တီးရန် လူတွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာနဲ့တူအောင်လုပ်ဆောင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် - R ကိုobots နှင့် Androids ။
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စဉ်းစားတွေးခေါ်သောစနစ်များ: မသန်စွမ်း လူသားများ၏ဆင်ခြင်တုံတရားယုတ္တိဗေဒစဉ်းစားတွေးခေါ် (ရိပ်မိ, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ပြုမူ) အတုယူပါ။ ဥပမာ - Sကျွမ်းကျင်သူစနစ်များ.
ဆင်ခြင်တုံတရားပြုမူကြောင်းစနစ်များ: မသန်စွမ်း ဆင်ခြင်တုံတရားကိုအတုယူ လူ့အပြုအမူ။ ဥပမာ - တစ်ခုစမတ်ကလူ။
ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် AI ကိုပလက်ဖောင်း
၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသော Artificial Intelligence platform ဖြစ်သည်
၎င်းကိုဂူဂဲလ် (Brain) ကအတွင်းပိုင်းအသုံးပြုရန်ဖန်တီးခဲ့ပြီး၊ Apache 2.0 open source လိုင်စင်အောက်တွင် ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်တွင်ပိတ်ပစ်ခဲ့သောအရင်းအမြစ်ယခင် DistBelief ကိုအစားထိုးခဲ့သည်။
၎င်းသည် Windows, Linux, MacOS နှင့် Android နှင့် iOS တို့ပါ ၀ င်သည့်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများအတွက်နက်ရှိုင်းစွာသင်ယူနိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စာကြည့်တိုက်တစ်ခုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
၎င်းကိုဂူးဂဲလ်ထုတ်ကုန်များသုတေသနအတွက်သာမကထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ပိတ်ထားသောအရင်းအမြစ်ယခင် DistBelief ၏အခန်းကဏ္replကိုအစားထိုးသည်။
Tensors ဟုခေါ်သော multidimensional data arrays များပေါ်ရှိဤစနစ်၏အာရုံကြောကွန်ယက်များ၏လုပ်ဆောင်မှုမှ၎င်း၏အမည်ကိုလာသည်။
မှတ်စု: သူမအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကသူမ၏ထံမှရရှိနိုင်ပါသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်.
၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယအများဆုံးအသုံးပြုသည့် Artificial Intelligence platform ဖြစ်သည်။
နက်ရှိုင်းစွာသင်ယူခြင်းအတွက် Facebook ၏အဓိကစာကြည့်တိုက်အဖြစ်လူသိများသည်။
၎င်းသည် tensor ပရိုဂရမ်းမင်းကို အသုံးပြု၍ ကိန်းဂဏန်းတွက်ချက်မှုများပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Python package ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Numpy အထုပ်အစားထိုးအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
၎င်းသည် GPU ပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်မှုသည်လုပ်ဆောင်သောတွက်ချက်မှုများကိုအရှိန်မြှင့်စေသည်။ ၎င်းသည် CPU ကို NVIDIA မှတီထွင်ထားသော GPU နှင့်ဆက်သွယ်ပေးသော API အတွင်းပိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်မော်ဒယ်လေ့ကျင့်ခြင်းကဲ့သို့အစဉ်အလာနှေးကွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်နက်ရှိုင်းသောလေ့လာသင်ယူမှုနယ်ပယ်ရှိသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ အဓိကအားဖြင့်အာရုံကြောကွန်ယက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအဓိက ထား၍ အလွန်ရိုးရှင်းသော interface တစ်ခုမှတဆင့်။
PyTorch သည် static များအစား dynamic graphs နှင့်အလုပ်လုပ်သည်။
၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ပရိုဂရမ်ဘာသာစကား Lua ကိုသင်လိုအပ်သည်။
Microsoft က CNTK
မင်းမျှော်လင့်ပါတယ် "သေးငယ်ပေမယ့်အသုံးဝင်သောပို့စ်" ဒီစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်း2«Plataformas de Inteligencia Artificial (IA) de Código Abierto» ခေါ်ဆိုခ «TensorFlow y Pytorch»တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ AI ကျွမ်းကျင်သူအားလုံးနီးပါးအလုပ်လုပ်သောယခုအချိန်တွင်အလွန်စိတ် ၀ င်စားမှုရှိပြီးအသုံးဝင်သည် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်များအတွက်အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ applications များနှင့်ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့မှကြီးသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » TensorFlow နှင့် Pytorch: ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ် AI ပလက်ဖောင်း
Edge, Microsoft ၏ web browser အသစ်သည် extensions များကိုစတင်လက်ခံနေသည်